YEYINTNGE(ကနဒေါ): Friday, May 16
Canadian Relief Efforts for Burma (update #2)
World Vision 470,000
Canada Red Cross 156,000
Humanitarian lition 155,000
Ontario Govern 100,000
Manitoba Govern 100,000
Toronto Relief Committe 56,000
Salvation Army 50,000
Vancouver Relief Committee 26,000
Steelworkers Union 20,000
DONATION BY COUNTRIES
South Korea 2,100,000
New Zealand 394,000
Czech Repub 330,000
BY YeYint Nge ... 5/16/20080comment
Canada urges Myanmar to accept its help
OTTAWA (AFP) — Prime Minister Stephen Harper said Monday that Canada wants desperately to help the victims of last week's deadly cyclone in Myanmar, but will not hand over aid to be distributed by its military junta.
"Canada is ready to help," Harper toldapress conference. "We've indicated at every level of the government, up to and including the Canadian military, that Canada is willing to assist" in relief efforts.
But, he said, "we will only provide the assistance ourselves or through the international community inaway that we can be sure that that assistance will reach the people it's intended to help."
"We are obviously not going to provide any assistance that would bolster or that would be used by the Burmese regime itself."
Last week, Canada offered two million dollars to support international humanitarian organizations including the United Nations, the International Red Cross and the World Food Program, to help the people of Myanmar.
But getting aid to those who need it most has been slow because Myanmar's leaders mostly rebuffed efforts by the international community to persuade them to open its doors to international disaster relief teams and supplies.
The flow of international aid into Myanmar, which says 62,000 people are dead or missing, has increased in the past two days, but relief agencies say much more is needed to avertahumanitarian catastrophe.
Please join in Global Day of Action on Burma in Canada - Saturday May 17
Supporters and activists in three major cities in Canada are already prepared to be taking part ina“Global Day of Action on Burma” this Saturday. The global action coordinated by Burma campaigners around the world is to call for international community to take an urgent action on the current humanitarian catastrophe in Burma. We urge all Canadians to join in one of the following solidarity rallies, or organizearally in your respective city.
1st Place: Parliament Hill at 1:00pm to 2:00pm, Burmese Embassy at 2:30pm to 3:30pm
(March will commence at 2:00pm to the Burmese Embassy)
2nd Place: Burmese Embassy, 85 Range St., Ottawa 2:30pm – 3:30pm
Contact: Tin Maung Htoo at 613-297-6835, or Kevin Macleod at 613-796-4963
Place: Queen’s Park, Ontario Legislative Assembly
Contact: Kyaw Zaw Wai at 416-358-2318, or Min Naing at 416-826-7149
Place: Robson Square, Vancouver Downtown
Contact: Soe Naing at soe.nai@gmail.com, or Htay Aung at 778-322-5385
Note: more cities will be added as soon as detailed information obtained.
Suite 206, 145 Spruce St.,
Ottawa, K1R 6P1;
Tel: 613.237.8056; Fax: 613.563.0017;
U.N.: Myanmar deaths could exceed 100,000
BANGKOK, Thailand (CNN) -- The death toll fromakiller cyclone in Myanmar could be "in the region of 100,000 or even more," says the chief of the United Nations Humanitarian Affairs and Emergency Relief agency.John Holmes, U.N. under-secretary general for humanitarian affairs, said Wednesday his organization already has confirmed 38,491 deaths -- much more than the 22,000 figure from Myanmar's government.
Citing figures from 22 organizations in 58 townships, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies said estimates of the death toll in Myanmar range from 68,833 and 127,990."They are all estimates, which may or may not be right," said spokesman John Sparrow. "There is no way to verify the figures, no way any organization could substantiate them."
Forecasts show that withinaweek, the Irrawaddy Delta -- the part of the country hardest-hit by the cyclone -- could receive another 12 cm (4.7 inches) of rain.
Three additional U.S. flights have already gone to Myanmar -- one on Monday and two on Tuesday. They carried food, mosquito netting and tarpaulins.Meanwhile, Pentagon officials said the USS Essex, USS Juneau and USS Harpers Ferry are in international waters off the coast of the country, laden with more than 14,000 containers of fresh water and other aid and awaiting orders to deliver by air or landing craft.
On Wednesday, British Prime Minister Gordon Brown asked U.N. Secretary-General Ban Ki-moon to convene an emergency summit on Myanmar aid. Ban has blasted the reclusive regime for what he called an "unacceptably slow response" to the disaster, and called, "in the most strenuous terms, on the government of Myanmar to put its
YANGON, May 16 (Xinhua) -- The death toll from Cyclone Nargis has risen sharply to 77,738 in Myanmar, the state television reported inanight broadcast Friday,afortnight after the disaster hit the country.
Thai Aid for Burma
A royal-sponsored advance team of Thai doctors spent Friday in Burma to prepare the
way forafull-fledged humanitarian medical aid mission to the victims of the May2cyclone. On the 14th day of the disaster, the military junta said the official death toll has climbed to 43,318, certainlyavast understatement, and authorities continue to block and harass aid efforts.
Dr Prat said that the Thai mobile medical unit plans to enter the Irrawaddy River Delta, which was worst hit by Cyclone Nargis for their two-week mission. The team won't set upamakeshift hospital but will move to several areas to give medical access to cyclone victims.
In addition to direct basic medical services, Department of Mental Health director general Dr Watchara Pengchan will share information and treatment experience on Thailand's response to tsunami victims to Burmese doctors trying to alleviate the psychological and emotional problems of the storm survivors.
Nevertheless, "Aid is getting though," said Steve Marshal of UNCT Myanmar and ILO liaison officer. Marshal recently returned from Burma.
"Our staff are down there and they are working. Things are happening, (but) not enough. We need more people, we need more cooperation," Marshal said.
"Up to two-and-a-half million are in need of aid," she said. "Clearly, needs are not being met." (BangkokPost.com from reports by TNA, dpa)
မြန်မာပြည်သစ် တည်ဆောက်ရေးအတွက်သာ ပြင်ဆင်ကြပါစို့
ယခင်က စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးအကြီးအကဲ အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ဖူးသူ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက သူ၏အာဏာ တည်မြဲ ရေးနှင့် နိုင်ငံကို အကြောက်တရားဖြင့် ဆက်လက်အုပ်ချုပ်ထားနိုင်ရေး အပေါ်တွင်သာ အာရုံထားနေသည်။
သူက ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသည့် ပြည်သူများအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှု မရှိသလို၊ ၀မ်းနည်းကြောင်းမှတ်တမ်းလည်း ဖော်ပြခဲ့ခြင်း မရှိ၊ မုန်တိုင်းကပ်ဘေးသင့် ဒေသများသို့ လှည့်လည်ကြည့်ရှုခြင်းလည်း အလျဉ်း မရှိပါ။ လွန်ခဲ့သည့် ၆-ရက် နာဂစ် ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိကကျသော ဒေသများကို ဖြတ်သန်းတိုက်ခတ်ပြီးသည့် အချိန်မှစ၍ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး လူမြင်ကွင်းမှ ပျောက်နေခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေနှင့် သူ၏မိသားစုဝင်များ၊ ခေါင်းမာဂိုဏ်းသား နောက်လိုက်များက သူတို့ကံကောင်းထောက်မစွာ နေပြည် တော်သို့ ကြိုတင်ပြောင်းရွှေ့ထားနိုင်ခဲ့သည့်အပေါ်တွင်ပင် ဂုဏ်ယူချီးကျူးနေကြပေလိမ့်ဦးမည်။ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းရှိ ၎င်းနေရာသို့ ၂၀၀၅ ခုနှစ်က လူထုကို ကြိုတင်အသိပေးခြင်း မရှိဘဲ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့နှင့် သဘာဝ အရင်းမြစ်များရောင်းရငွေများဖြင့် သူက ဒေါ်လာ သန်း ၁,၀၀၀ ကျော် သုံးစွဲ၍ တောတောင်ထဲတွင် မြို့တော်သစ်တည်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန်တွင်ဆက်နေလျှင် သဘာဝကပ်ဘေးဒဏ်၊ လူထု မငြိမ် မသက်မှုများ ကြုံရနိုင်သည်၊ သို့အတွက်ကြောင့် ဤသို့ မြို့သစ်တည်ရန်လည်း သူ၏အခါပေး ဗေဒင်ယတြာဆရာများက ယခုလို တိုက်တွန်းခဲ့ကြသည်ဟု ကောလာဟလများက ဆိုကြသည်။
ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ ဆိုင်ကလုန်းနာဂစ်ဒဏ်မှ လွတ်မြောက်ခဲ့သော်လည်း၊ သူ၏ နောက်ဆုံးနေ့ရက်များဖြစ်နေပြီ ဆိုသည့် အချက်ကိုမူ ကျော်လွှား လွတ်မြောက်နိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသနေ ပြည်သူများကို သင့်လျော်သည့် မုန်တိုင်းသတိပေးမှုများ လေးလေးနက်နက် ဆောင်ရွက် ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီးနောက်၊ ယခုအခါ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေက ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကပ်ဘေးသင့် ပြည်သူများသို့ ကုလသမဂ္ဂ၊ နိုင်ငံတကာ အစိုးရများနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၏ အကူအညီမရောက်နိုင်အောင် ပိတ်ပင်တားဆီးနေခြင်းဖြင့် လူသားချင်းစာနာမှုကို ချိုးဖောက်သည့် ရာဇ၀တ်မှုကြီးကို ထပ်မံကျူးလွန်နေပြီ ဖြစ်သည်။
ဤလုပ်ရပ်ဖြင့် သူက မည်သည့်လူစားမျိုး ဖြစ်သည်ကို ကမ္ဘာက သိရှိအောင်ပြသခဲ့ပြီး၊ စိတ်ဖောက်ပြန် အာဏာရူးနေသူ ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိစေခဲ့သည်။ သူ့လူထုများကို ဓားစာခံအဖြစ် သေနတ်ထောက် ချုပ်ကိုင်ထားသူတဦးဖြစ်ပြီး၊ နိုင်ငံကို ဆက်လက်အုပ်ချုပ်ရန် လုံးဝမသင့်တော်တော့သူ တဦးလည်း ဖြစ်သည်။
ဤဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းက ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်သည့် နိုင်ငံတော်သစ် တည်ဆောက်နေကြသည်ဟု ကြွေးကြော်နေ သော ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ၏ စစ်အစိုးရ၏ မျက်နှာဖုံးကိုလည်း ဆွဲခွါချလိုက်သည်။ ဤသို့ နိုင်ငံအပေါ် မုန်တိုင်းကျရောက် ဖျက်ဆီးစေ ခဲ့မှုအတွက် သူတို့တွင် လုံးဝတာဝန်ရှိပြီး၊ ဤကိစ္စအတွက် တရားသဖြင့် စီရင်ခံကြရမည် ဖြစ်သည်။
ဤစစ်အစိုးရ ပြိုကျပျက်စီးသွားပြီးနောက် မည်သို့ ဖြစ်ပေါ်လာမည်နည်းဟူသည့် မိုးပြိုမည်ကို တွေးကြောက်နေသည့် မေးခွန်းများဖြင့်လည်း စိုးရိမ် ကြောက်လန့်နေဖွယ် မရှိတော့ပါ။ နိုင်ငံတော်ကြီး ပြိုကွဲလိမ့်မည်၊ မည်သူက ဦးဆောင်ပါမည် နည်းဟူ၍လည်း ပူပန်နေရန် မလိုတော့ပါ။
ဤမေးခွန်းများကို နိုင်ငံရပ်ခြား ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် စစ်အစိုးရ အလိုကျလိုက်ပြောနေသူများ၊ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ အလိုကျ ဘောင်းတော်ညိတ် စိတ်တော်သိ လုပ်နေသူ အခွင့်အရေးသမားများ၊ စစ်အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဘယ်အခါမှ မပျက်ကွက်ခဲ့ကြသူ ငို့ဘသမားများ ဆက်လက် ဆွေးနွေးငြင်းခုန်ကြရန် ထားလိုက်သည်က ပိုကောင်းပါသည်။
သေချာသည့်အချက်မှာ မြန်မာပြည်သူများက ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်နေသည့်၊ အကြင်နာတရားလုံးဝမရှိဘဲ ပြည်သူကို ဂရုမစိုက် လျစ်လျူရှုထားသည့် စစ်အစိုးရမျိုး ကို မလိုလားကြတော့ပါ။ လူထုများ၏ ဒေါသရေချိန်ကို တွက်ဆရန် အကဲဖြတ်လေ့လာ ရေးအသင်းများ၊ အကြံပေးများ စေလွှတ်နေရန် မလိုတော့ပါ။ မြန်မာပြည်သူတို့က အလွန်အကျူး စိတ်ပျက်နေကြပြီး၊ စစ်အစိုးရကို ချက်ချင်းလက်ငင်း ဖြုတ်ချဖယ်ရှားလိုနေကြပါသည်။
မိမိတို့ အဓိကထားပြောနေသည်မှာ လက်နက်ကိုင် တပ်သားများအပါအ၀င်ဖြစ်သည့် မြန်မာပြည်သူလူထု ၅၄ သန်းကို ချုပ်ကိုင်ထားသည့် တဒါဇင်မျှသော ခေါင်းမာဂိုဏ်းသားများနှင့် သူတို့၏ လက်ဝေခံများ ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဤအုပ်စုကို သာ မြင်ကွင်းမှ ဖယ်ရှားလိုက်ပါက မြန်မာပြည်သူများအတွက် ဒုက္ခအပေါင်းမှ အများကြီး သက်သာသွားလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ သာမန်စစ်သားများနှင့် အရာရှိများလည်း လွတ်လပ် ပေါ့ပါးသွားကြပါလိမ့်မည်။
စိုးရိမ်ပူပန်နေဖွယ် မရှိပါ။ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ စစ်အစိုးရရှိ ခေါင်းဆောင်များနေရာတွင် အစားထိုးနိုင်ပြီး၊ နိုင်ငံကို စီမံခန့်ခွဲနိုင် သူ များစွာ ရှိနေပါသည်။ ထိုသူများမှာ လူမသိ သူမသိ ဖြစ်ချင် ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း ထိုသူများမှာ နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံ ရေး၊ စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းကာလများကြားထဲမှ မွေးဖွားပေးလိုက်သူများ ဖြစ်ပါသည်။
ဤနိုင်ငံခေါင်းဆောင်သစ်များသည် အိမ်အကျယ်ချုပ်၊ ထောင်အတွင်းနှင့် ပြည်ပတွင် ရှိနေကြပြီး၊ လက်ရှိ မုန်တိုင်း ကပ်ဘေးသင့် ပြည်သူများကို ကူညီနေကြသူများထဲတွင်လည်း ရှိနေကြပါသည်။
အမည်အချို့ ချရေးကြည့်ကြပါစို့။ မြန်မာပြည်တွင်းရှိနေကြသည့် ခေါင်းဆောင်အလာအလာရှိနေသူ အချို့ကို ဖော်ပြရလျှင်...
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ ဖြစ်ကြသည့် ကိုကိုကြီး၊ ကိုဂျင်မီ၊ ကိုဌေးကြွယ်၊ ကိုမင်းဇေယျ၊ ကိုပြုံးချို၊ အလုပ်သမား အရေး လှုပ်ရှားနေသူ မစုစုနွေး၊ ရှမ်း အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ခွန်ထွန်းဦး၊ ရခိုင် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် ဦးအေးသာအောင်... စသဖြင့် ရှိနေကြပါသည်။
အခြားခေါင်းဆောင်များတွင် ဇိုမီးအမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျင့်ရှင်းထန်၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (UNLD) မှ ဦးထောင်ခိုထန်း၊ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) နှင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP) ခေါင်းဆောင် များလည်း အပါအ၀င် ဖြစ်သည်။
ထိုမျှမက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) မှ ရွေးချယ်ခံ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပြည်ပရောက် အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များသည်လည်း မြန်မာပြည်သစ် ပြန်လည်မွေးဖွားပေါ်ထွန်းရေးအတွက် တတပ်တအား ဦးဆောင်ကြိုးပမ်း နိုင်သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။
ပြည်ပရောက်နေသူများအနက် ရှမ်း အမျိုးသမီးလှုပ်ရှားသူ နန်းချမ်ထောင်း၊ "မြန်မာနိုင်ငံ၏ မာသာ ထရီဇာ" ဟု လေးစားစွာ တင်စားခေါ်ဆိုနေကြသည့် ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်၊ ထင်ရှားသည့် နိုင်ငံရေးသမားများနှင့် လှုပ်ရှားသူများဖြစ်ကြသည့် ဒေါက်တာသောင်းထွန်း၊ ကိုအောင်ဒင်၊ ဒေါက်တာဇော်ဦး၊ ဦးသန့်မြင့်ဦး၊ ဦးဟန်ညောင်ဝေ၊ ကိုအောင်နိုင်ဦး၊ ကိုဝင်း မင်းတို့သည်လည်း ပြည်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွင် အဆင်သင့် ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။
ဤစာရင်းများ ဆက်ရလျှင် နည်းပညာပံ့ပိုးပေးမည့် ပညာရှင်များအပိုင်းတွင် စီးပွားရေးပညာရှင်များ၊ သံအမတ်ဟောင်းများ၊ ယခင် တပ်မတော်တာဝန်ယူဖူးကြပြီး လက်ရှိစစ်အုပ်စုနှင့် ခပ်ကင်းကင်း နေနေကြသည့် စစ်တပ် အရာရှိဟောင်းများ ရှိနေ ကြပြီး ထိုသူများကလည်း မြန်မာပြည်သစ် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက် ကူညီလိုကြပါသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ထဲ၌ပင် ယခင် အဆင့်မြင့်တာဝန်ယူဖူးကြသူများ၊ စစ်အရာရှိဟောင်းများ ပါဝင်နေပြီး ထိုသူများက အပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်စေရန် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေကြပါသည်။ (NLD) ပါတီ၏ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးတင်ဦးသည် ယခုအခါ အိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရပြီး၊ အခြား အဆင့်မြင့်ခေါင်းဆောင်များနှင့် အတူ ပါတီကို ဦးဆောင် နေကြပါသည်။ ထိုမျှမက များစွာ ရှိနေပါသေးသည်။
သေချာသည့်အချက်မှာ ထိုသူများက မြန်မာနိုင်ငံ၏ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၊ နိုင်ငံတကာမိသားစုနှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင် ကြရာ မြန်မာပြည်သူများ၏ အသက်ကို ကာကွယ်နိုင်ရုံမျှမက ဒီမိုကရေစီ၊ လွတ်လပ်ခွင့်များနှင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုများကို လည်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။
ထိုမျှမက အကယ်၍ အရေအတွက် ၂, ၀၀၀ မျှရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုသာ ယနေ့ ပြန်လွှတ်ပေး ခဲ့ပါက မြန်မာနိုင်ငံကို ဦးဆောင်နိုင်သူ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများစွာ ပေါ်ထွက်လာဦးမည် ဖြစ်ပါသည်။
သူက နောက်ဆုံးပြုခဲ့သည့် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွင် နိုင်ငံရေးအာဏာအတွက်၊ ရာထူးအတွက် မမက်မောကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ ထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ကုလသမဂ္ဂ အထူးသံ အီဗရာဟင် ဂမ်ဘာရီက တိတ်တဆိတ် ခိုးထုတ်ယူဆောင်လာရသည့် သူမ၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာ ချက်တွင် " ဒီမိုကရေစီ လူမှုလူ့ဘောင်အတွင်းရှိ နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ အရေးပါသည့် အခန်းကဏ္ဍကို လုံးဝအသိအမှတ် ပြုပါသည်။ မိမိပါတီဝင်များ၏ ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံဆောင်ရွက်မှုများကိုလည်း လေးစားချီးကျူးပါသည်။ ပါတီ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး တဦးအနေဖြင့် မိမိကို ပါတီ၏ မူဝါဒများနှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ လိုလားချက်များက လမ်းညွှန်နေပါသည်။ သို့ရာတွင်လည်း ယခုအချိန်သည် ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများအတွင်း ညီညွတ်ရေးနှင့် သွေးစည်းညီ ညွတ်ရေး လိုအပ်နေသည့်အချိန်ဖြစ်ရာ မိမိအနေဖြင့် ဖြစ်နိုင်သမျှသော အကျယ်အပြန့်ရှိနေသည့် နိုင်ငံရေး အင်အားစုများ၏ အမြင်သဘောထားများနှင့် အကျိုးစီးပွားများကိုလည်း အမြဲတစေ လေးနက်စွာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည် မှာ မိမိတာဝန် ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ဆန္ဒကို ထည့်သွင်း၍ လေးနက်စွာ စဉ်းစားရန် ဖြစ်ပါသည်" ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေကို မနှိုင်းအပ်ပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုရှင်အနေဖြင့် အာဏာကို မျှော်မှန်း ထားခြင်းလည်း မရှိပါ။
သို့သော်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အခန်းကဏ္ဍက ထိုထက်ပို၍ ကြီးမြင့်ပါသည်။ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးလုပ် ငန်းများတွင် အဓိက အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံကို ပြောင်းလဲလိုသည့် စစ်တပ်အတွင်းရှိ သဘော ထားပျော့ပြောင်းသူ စစ်အရာရှိများ၊ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုအတွက် တောင်းဆိုနေသူ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ အကြား ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပေးနိုင်ပါသည်။
တိုင်းမ် (Time Magazine) မဂ္ဂဇင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကမ္ဘာပေါ်တွင် သြဇာအကြီးဆုံး လူ (၁၀၀) စာရင်းတွင် မကြာသေးမီက ထည့်သွင်း ရွေးချယ်ဖော်ပြခဲ့ပြီး၊ ယခုတိုင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ငြိမ်ရေး၊ ကြွယ်ဝချမ်းသာရေးနှင့် ညီညွတ် ရေးကိစ္စများတွင် လမ်းပြအလင်းတန်းသဖွယ် ဖြစ်နေပါသေးသည်။
မကြာသေးမီက အဖြစ်အပျက်များကိုကြည့်လျှင် မေလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည်ဟု လျာထားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေဆိုင်ရာ ဆန္ဒခံယူပွဲကို ရွှေ့ဆိုင်း၍၊ မြန်မာစစ်အစိုးရက ကြောက်မက်ဖွယ် ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်း ကပ်ဘေးဆိုးကြီး သင့်ခဲ့ရသူများအတွက် ကယ်ဆယ်ရေး၊ သက်သာချောင်ချိရေး ကိစ္စများကို အပူတပြင်း ဆောင်ရွက်ရမည့်အချိန် ဖြစ်ပါ သည်။
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်ကလည်း မြန်မာပြည်သူများ သက်သာချောင်ချိရေးနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး၊ စစ်အစိုးရက ဆန္ဒခံယူပွဲ ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည်ဟူသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် မှတ်ချက်ချ ခဲ့ပါသေးသည်။ စစ်အစိုးရ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသည့် နေရာအချို့တွင် ဆန္ဒခံယူပွဲကို ရွှေ့ဆိုင်းခြင်းမှအပ ကျန်နေရာများတွင် ဆက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။
" ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကြုံတွေ့ခံစားနေရသည့် ကပ်ဘေးဒုက္ခ အတိုင်းအဆကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်၊ မည်သို့ဆိုစေ၊ ကုလ သမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် အနေဖြင့် ယုံကြည်သည်မှာ ရရှိနိုင်သမျှသော အရင်းအမြစ်များ၊ စွမ်းအားများကို အရေးပေါ် တုံ့ပြန်ကူညီရေးကိစ္စများတွင်သာ စုစည်းအာရုံထားဆောင်ရွက်သည်ကသာ ပို၍ လက်တွေ့ကျ အဓိပ္ပါယ်ရှိပေ လိမ့်မည်" ဟု ကုလသမဂ္ဂ အကြီးအကဲက ထုတ်ပြန် ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
လူ့အခွင့်အရေး လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ (Human Rights Watch) က ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွင်လည်း မြန်မာ စစ် အစိုးရအနေဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေဆိုင်ရာ ဆန္ဒခံယူပွဲကို ရွှေ့ဆိုင်းထားသင့်ကြောင်းနှင့် အကူအညီပေးရေး ကြိုးပမ်းချက်များ ကို ပိတ်ဆို့နေမှုများ ရပ်တန့်သင့်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာ အကူအညီပေးရေး အေဂျင်စီများသို့ ကန့်သတ်ထားချက်များကို ဖယ်ရှား ရုပ်သိမ်းပေးသင့်ကြောင်း တိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။ သို့မှသာ ၎င်းတို့က အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများအတွက် ချက်ချင်း တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော်လည်း ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ၏ စစ်အစိုးရက နားမ၀င်ခဲ့ပါ။ ဤသို့ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည့် မေတ္တာရပ်ခံချက်များကို နားမထောင်နိုင်ကြပါ။ ရန်ကုန်မြို့ အပါအ၀င်၊ ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းကပ်ဘေး အပြင်းအထန်သင့်ခဲ့ရသည့် မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်းရှိ မြို့နယ် (၄၇) ခုတွင် မေလ ၂၄ ရက်နေ့မှ မဲပေးရန် ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ခြင်းသာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ဤသို့ ကပ်ဘေးဒုက္ခများ ခံစားနေရစဉ်မှာပင် ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေနှင့် ၎င်း၏ ခေါင်းမာဂိုဏ်းသား ဗိုလ်ချုပ်များ၊ ၀န်ကြီးများက သူတို့အလိုကျ ရေးဆွဲထားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေကို အတည်ပြုရေး လိုလားနေကြပါသေးသည်။
ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေက အာဏာကို ဆက်လက်တွယ်ဖက်နေပြီး၊ ၎င်းပြည်သူများ၏ တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်နေသမျှ၊ လူအများနှင့် တူတူတန်တန်ဖြစ်သည့် ရည်မွန်မှု ပြသရန် တောင်းဆိုနေသည့် ယဉ်ကျေးမှုရှိသော လူ့ကမ္ဘာ အသိုင်းအ၀ိုင်း ၏ တောင်းဆိုချက်များကို လျစ်လျူရှုနေသမျှ၊ မြန်မာပြည်သူများ၊ ကမ္ဘာ့ မိသားစုဝင်များ၊ အစိုးရများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ မြန်မာပြည်သားများ၏ အသက်များ၊ ဘ၀များနှင့် မြန်မာပြည်တခုလုံးကို ကယ်တင်နိုင်ရန် အခြားဖြစ်နိုင်သည့် နည်းလမ်း များဖြင့် ကြိုးပမ်းကြရတော့မည့် အရေးအကြီးဆုံး အချိန်သို့ ဆိုက်ရောက်နေပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း..။
လေဘေး ပြန်လည်ထူထောင်ရေး စစ်အစိုးရက စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများကို ကန်ထရိုက်ပေး
ကိုစိုး | မေ ၁၆၊ ၂၀၀၈(Irrawaddy)
နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း ဒဏ်ကြောင့် ဧရာဝတီ တိုင်းနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းတို့ရှိ အဆောက်အဦ အိမ်ရာစသည့် ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှုများ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက် စစ်အစိုးရ၏ မြို့ရွာ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအဖွဲ့က ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီ ၄၃ ခု ကို လုပ်ငန်းများ ခွဲဝေချထားပေးရန် လျာထားကြောင်း ရန်ကုန် စီးပွားရေး အသိုင်းအဝန်း မှ သိရှိရသည်။
အဆိုပါစီမံကိန်းအတွက် မြို့နယ်အလိုက်လုပ်ငန်းများခွဲဝေရရှိမည့် ကုမ္ပဏီများတွင် စစ်အစိုးရနှင့် နီးစပ်ပြီး အကျိုး စီးပွား များစွာ ဖြစ်ထွန်းနေသော နာမည်ကြီး ဧရာရွှေဝါ၊ ဇေကမ္ဘာ၊ ယုဇန၊ အေးရှားဝေါလ်၊ ထူး၊ ဧဒင်၊ ရွှေသံလွင်၊ မက်စ် မြန်မာနှင့် အက်ဖ် အမ် အိုင် စသည့် ကုမ္ပဏီများ ထိပ်ဆုံးမှ ပါဝင်ကြောင်း နီးစပ်သူများကပြောဆိုသည်။
ရန်ကုန်မြို့မှ စီးပွားရေးသမားတဦးကမူ“မကြာခင်သေးခင်ကပဲ အစိုးရက ကုမ္ပဏီတွေကို ပိုက်ဆံချမပေးနိုင်ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ကုမ္ပဏီတွေကို ကားပါမစ်တွေတော့ ထုတ်ပေးလိုက်တယ်တဲ့”ဟု ပြောသည်။
ယင်းကုမ္ပဏီများထဲမှ ဧရာရွှေဝါ ကုမ္ပဏီသည် နအဖ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်း၏ သား ဦးအောင်သက်မန်းပိုင် ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး လပွတ္တာမြို့နယ်တွင် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကုမ္ပဏီ သည် နေပြည်တော် စစ်ရုံးဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း ကန်ထရိုက်ရရှိခဲ့ဖူးသည်။
လပွတ္တာမှ ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေသူတဦးကမူ ယင်း ဧရာရွှေဝါကုမ္ပဏီသည် စာသင်ကျောင်းများနှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်း များတွင် ခိုလှုံနေသည့် လေဘေး ဒုက္ခသည်များကို အဓမ္မခေါ်ယူ၍ တနေ့ ကျပ် ၈၀၀ ဖြင့် အလုပ်ခိုင်းစေမှုများ ရှိကြောင်း ပြောပြသည်။
လပွတ္တာတွင်ပင် ဇေကမ္ဘာ၊ မက်စ်မြန်မာ နှင့် ဝါဝါဝင်း ကုမ္ပဏီတို့သည်လည်း လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။ ယင်း လပွတ္တာမြို့နယ် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများ တာဝန်ခံမှာ ဗိုလ်ချုပ်ဌေးဦး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့် နီးစပ်သူဟု လူအများပြောဆိုနေကြသော ဦးတေဇ ၏ ထူး ကုမ္ပဏီမှာမူ ဘိုကလေးမြို့ လုပ်ငန်း များကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ဒိုင်းမွန်းမာကျူရီအမည်ရှိ ကုမ္ပဏီတခုလည်းဘိုကလေးတွင် လုပ်ကိုင်ခွင့် ရမည်ဟု ဆိုသည်။ ဘိုကလေးမြို့၏ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ တာဝန်ခံမှာ ဗိုလ်မှူးချုပ် သိန်းအောင် ဖြစ်သည်။
ဘိန်းဘုရင် လော်စစ်ဟန်၏သား ဦးထွန်းမြင့်နိုင်(စတီဗင်လော) ပိုင်ဆိုင်သော အေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီသည် ကွမ်းခြံကုန်းမြို့ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများကို ၎င်းတဦးတည်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးရန် လျာထားခံရကြောင်း နှင့် ဧဒင် ဆောာက်လုပ် ရေး ကုမ္ပဏီကိုလည်း ဒေးဒရဲ မြို့အတွက် တဦးတည်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးရန် လျာထား ကြောင်း တို့ကိုလည်း သိရှိရသည်။
ကွမ်းခြံကုန်းနှင့် ဒေးဒရဲ မြို့တို့၏ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ တာဝန်ခံမှာ ဗိုလ်မှူးချုပ် လွန်းသီ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ရွှေသံလွင် နှင့် အက်ဖ်အမ်အိုင် ကုမ္ပဏီတို့မှာ ရေတပ်အခြေစိုက် ဟိုင်းကြီးကျွန်းနှင့် ငပုတောမြို့တို့၏ ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများရရှိမည်ဖြစ်ပြီး အရုဏ်ဦး၊ တက်လမ်း၊ မိုးကြယ်စင်နှင့် သိဏ်းအမည်ရှိ ကုမ္ပဏီများလည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းဒေသ၏ ပြန်လည်ထူထောင်တည်ဆောက်ရေး တာဝန်ခံမှာ ဗိုလ်မှူးချုပ် မျိုးမြင့်သန်း ဆိုသူ ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်အခြေစိုက် ဝါရင့် မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာ တဦးကမူ အစိုးရအနေနှင့် ဒုက္ခသည်များအတွက် ကူညီကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများကိုသာ ဦးစားပေးလုပ်သင့်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
“အစိုးရအနေနဲ့ အခုအချိန် ဦးစားပေးလုပ်ရမှာက ဒုက္ခသည်တွေလိုအပ်နေတဲ့ အစားအစာ၊ အမိုးအကာတွေနဲ့ သောက်သုံး ရေသန့် တွေရအောင်လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်၊ အစိုးရက ဒုက္ခသည်တွေကို ကျပ် ၁ သောင်းလောက်တန်တဲ့ သွပ် တချပ်ကို ၄၅၀၀ နဲ့ရောင်းပေးတယ်တဲ့၊ ဒါပေမယ့် ဒုက္ခသည်တွေမှာက ဝယ်စရာ ပိုက်ဆံတပြားမှ မရှိဘူး”ဟု အထက်ပါ ဝါရင့် အယ်ဒီတာ က ပြောသည်။
ယင်းသို့ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ခွင့်ပေးရန်လျာထားသည့် ကုမ္ပဏီများတွင် တခြားသော ဒဂုံ၊ ယုဇန၊ ပြည့်ဖြိုးကျော်၊ အေဝမ်း၊ တီဇက် တီအမ်၊ Original ၊ မောင်ဝိတ်၊ Golden Flower ၊ ဖွံ့ဖြိုးအောင်၊ Tosta ၊ ရွှေတောင်၊ Asia Express ၊ Naing Group ၊ Universal ၊ သော်တာဝင်း ၊ Shine ၊ အက်ပီဒင် ၊ အေရိပ်မွန် ၊ Excel ၊ ရွှေကမ္ဘာ ၊ နောင်တုံ ၊IEG ၊ ရွှေဘုရင်၊ မြန်မာ့အလှ ၊ Opal ၊ ချမ်းသာ ၊ WHK ၊ KMA ၊ ဌေးမိသားစု စသည့် ကုမ္ပဏီများလည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် ပြန်လည်ထူထောင် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများပြုလုပ်မည့် မြို့နယ်များမှာ ဧရာဝတီတိုင်းမှ လပွတ္တာ၊ ဘိုကလေး၊ ဖျာပုံ၊ မော်လမြိုင်ကျွန်း၊ ကျိုက်လတ်၊ ဒေးဒရဲ ၊ ငပုတော(ဟိုင်းကြီး) စသည့် (၇) မြို့နယ် အပါအဝင် ရန်ကုန်တိုင်းမှ တွံတေး၊ သံလျင်/ကျောက်တန်း၊ ခရမ်း၊ သုံးခွ၊ ကွမ်းခြံကုန်း၊ ကော့မှူး၊ ဒလ ၊ ဆိပ်ကြီး/ ခနောင်တို မြို့နယ် များ နှင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ အရှေ့ပိုင်း ခရိုင် (အေ) (ဘီ) နှစ်ပိုင်းနှင့် အနောက်ပိုင်းခရိုင် (စီ) (ဒီ) နှစ်ပိုင်း တို့ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယနေ့ထုတ် အစိုးရ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိန်က ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်၍ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများကို စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းလုပ်ငန်းများ အတွက် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများ၏အကူအညီကို ရယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုချက်ကို ဖော်ပြ ထားသည်။
မေလ ၁၂ ရက်နေ့က ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တွင်ပြုလုပ်သည့် လေဘေးသင့်ဒေသများ ပြန်လည်ထူထောင် တည်ဆောက် ရေး အစည်းအဝေးတွင်လည်း ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်က ပြောကြားခဲ့သည်ဟု မေလ ၁၃ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာက ဖော်ပြသည်။ [T
မုန်တိုင်းကြောင့် သေဆုံးသူ (၉၀) ရာနှုန်းကျော်တွင် ကလေး၊ အမျိုးသမီးနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ ဖြစ်နေ
NEJ/ ၁၆ မေ ၂၀၀၈
ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင် နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် သေဆုံးသူ အများစု၏ (၉၀) ရာနှုန်း ကျော်သည် ကလေးသူငယ်များ၊ အမျိုးသမီးများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများဖြစ်သည်ဟု CARE ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့က ယနေ့ ထုတ်ဖော်ပြောသည်။
ဧရာဝတီတိုင်း ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများတွင် အများစုက အရွယ်ရောက်ပြီးသူများဖြစ်ပြီး ကလေးနှင့် အမျိုးသမီးအရေအတွက် နည်းနေကြောင်း၊ ကလေးအများစုမှာ ရေနစ်သေဆုံးပုံ ရကြောင်း CARE တာဝန်ခံ Brian Angland က ပြောသည်။ ရွာတရွာဆိုလျှင် အသက်ရှင် ကျန်သူ (၅၀၀) သည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ ဖြစ်နေသည်ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။ကျွမ်းကျင်သည့် CARE အဖွဲ့ဝင်များ ဧရာဝတီတိုင်းရှိ မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် သေသူများကို လေ့လာ ဆန်းစစ်ပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ CARE အဖွဲ့သည် ဆွတ်ဇာလန် နိုင်ငံအခြေစိုက် လူမှုဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ၀န်ထမ်းအင်အား (၅၀၀) ကျော်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း (၁၄) နှစ်ကျော် လုပ်ကိုင်နေသည့် NGO အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ။
ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေး အကြီးအကဲမြန်မာနိုင်ငံဝင်ရန် ဗီဇာစောင့်နေဆဲ
AFP / ၁၆ မေ ၂၀၀၈
နိုင်ငံခြားမှ အကူအညီပေးရေး ကျွမ်းကျင်သူများကို လက်ခံရေး စစ်ခေါင်းဆောင်များအား တိုက် တွန်းရန် မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်မည့် ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေး အကြီးအကဲ ဂျွန်ဟုမ်းစ်သည် ပြည်ဝင်ခွင့် စောင့်ဆိုင်းနေရဆဲဖြစ်သည်။
မစ္စတာဟုမ်းစ်အနေဖြင့် ပြည်ဝင်ခွင့်ရမည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း၊ လာမည့် (၅-၆) ရက်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိသင့်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ ပြောခွင့်ရ အမျိုးသမီး မစ်ရှဲ မွန်းတပ်စ်က ပြောသည်။
နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်း တိုက်ပြီးနောက် (၂) ပတ်ခန့်ကြာသည်အထိ နိုင်ငံခြား ကျွမ်းကျင်သူများကို လက်မခံသေးသဖြင့် ဒုက္ခသည် အမြောက်အမြား ထပ်မံသေဆုံးဖွယ်ရှိကြောင်း ကုလသမဂ္ဂက သတိပေးထားသည်။
သို့သော် မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်များကမူ မုန်တိုင်းဘေးမှ အသက်ရှင် ကျန်ရစ်သူ ဒုက္ခသည်များ အတွက် အရေးပေါ် လိုအပ်နေသော အစားအစာ၊ သောက်ရေသန့်၊ အမိုးအကာနှင့် ဆေးဝါးများကို ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရန် နိုင်ငံခြားမှ ကျွမ်းကျင်သူများကို ပြည်ဝင်ခွင့်ပေးရန် ငြင်းနေဆဲဖြစ်သည်။
နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် သေဆုံးသူ (၄၃,၃၁၈) ဦး၊ ပျောက်ဆုံးသူ (၂၈,၀၀၀) ဦးရှိပြီး အရေးပေါ် အကူအညီ လိုအပ်နေသူ (၂) သန်းခန့်ရှိကြောင်း စစ်အစိုးရ သတင်းဌာနများက ဖော်ပြသည်။ အရှေ့တောင်အာရှ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကလည်း အကူအညီပေးရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိသည်။
အသေးစိတ် အချက်အလက်များ ရှာဖွေမည့် မြန်မာနိုင်ငံအား ကူညီနိုင်ရေး အစည်းအဝေးတခု ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကျင်းပနိုင်ရန် ယခုလ (၁၉) ရက် စင်ကာပူနိုင်ငံ၌ ပြုလုပ်မည့် အာဆီယံ
၀န်ကြီးအဆင့် အရေးပေါ် အစည်းအဝေးကို ကုလသမဂ္ဂ တာဝန်ရှိသူများက စောင့်ဆိုင်းနေ ကြသည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေး ကျင်းပမည့်နေရာ၊ ပါဝင်တက်ရောက်ခွင့်ရမည့် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ စင်ကာပူအစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများက ဆွေးနွေးကြမည် ဖြစ်ကြောင်း ကုလပြောခွင့်ရသူ မစ္စမွန်းတပ်စ်က ပြောသည်။
ယခုလ (၂) ရက်ညမှ စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သော နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စပါးကျီ ဖြစ်သော ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသသည် ကျေးရွာများ အားလုံးနီးပါး ပျောက်ကွယ်သွားပြီး ဒုက္ခဆိုးများ ကြုံတွေ့နေရသည့် ရေလွှမ်းမိုးရာဒေသတခုအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။
လူသေအလောင်းများ ရေပေါ်တွင် မျောနေပုံ၊ ထောင်ပေါင်းများစွာသော အသက်ရှင် ကျန်ရစ်သူ များက လမ်းများပေါ်တွင် အစားအစာ ရရှိရေး စီတန်းပြီး တောင်းခံနေကြပုံများကို အဆိုပါ မုန်တိုင်းဘေးသင့်ဒေသများမှ ပြန်ရောက်လာကြသော သတင်းသမားများက ပြောပြကြသည်။ ယခုအခါ စစ်ခေါင်းဆောင်များက သတင်းထောက်များအား အဆိုပါဒေသများသို့ သွားရောက်ခွင့် တင်းကျပ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
နိုင်ငံခြားမှ ကျွမ်းကျင်သူ အကူအညီများ မပါဝင်ဘဲ နိုင်ငံသားများသည် မိမိတို့ဖာသာ ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများအား လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်း စစ်အစိုးရပိုင် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာမှ ဖော်ပြနေသည်။
နိုင်ငံတကာမှ ခေါင်းဆောင်များကမူ မြန်မာစစ်အစိုးရအား နိုင်ငံတကာ အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ များကို ပိုမိုလက်ခံရန် တိုက်တွန်းနေကြသည်။
“လတ်တလော ဖြစ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတကာ ဘေးဒုက္ခဆိုးတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် အခုကိစ္စမှာ တုံ့ပြန် ဆောင် ရွက်မှုဟာ အရမ်းကို နှေးကွေးနေပါတယ်။ ဒီလို နှေးကွေးနေတာမျိုး တခါမှ မကြုံဖူးပါဘူး” ဟု ဗြိတိန်အဆင့်မြင့် သံတမန်ဖြစ်သူ မာ့ခ် မဲလော့ခ်ျ-ဘရောင်းက ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပြောသည်။
စစ်အစိုးရက ဘုန်းကြီးကျောင်းများတွင် ခိုလှုံနေကြသည့် ထောင်နှင့်ချီရှိသော မုန်တိုင်းဘေးသင့် ဒုက္ခသည်များအား အတင်းအကျပ် နှင်ထုတ်နေကြောင်းလည်း သိရသည်။
မိုးထပ်မံရွာသွန်းနေခြင်းကြောင့် အငတ်ဘေးကြုံနေရသည့် အဆိုပါဒုက္ခသည်များသည် မြွေပါး ကင်းပါးနှင့် အဆုတ်ရောင် ရောဂါအန္တရာယ်များ ထပ်မံဖြစ်ပေါ်နိုင်မည့် အလားအလားများ ရှိနေသည်။
“အခုတွေ့ဆုံရတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေထဲက တ၀က်လောက်ဟာ လုံခြုံတဲ့ အဆောက်အဦတွေနဲ့ နေရ တာမဟုတ်ပါဘူး။ မိုးထဲ လေထဲမှာ ပလတ်စတစ် မိုးကာတွေ အောက်မှာပဲ ဖြစ်သလိုနေရတာကို တွေ့ရတော့ တကယ်ပဲ စိတ်ကြေကွဲစရာပါ” ဟု မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အကူအညီပေးနေသည့် Save the Children အဖွဲ့မှ ပြောခွင့်ရအမျိုးသမီး ကက်သရင်းရောက ပြောသည်။ ။
နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ပြီး (၁၂) ရက်အကြာ မေ (၁၅) မှစပြီး ဧရာဝတီတိုင်း လပွတ္တာနှင့် ဘိုကလေး ဘက်မှ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသည့် အခြေအနေများကို ရိုက်ကူးထားသည့် ဗီဒီယိုနှင့် ဓာတ်ပုံများ ပါဝင်သည့် စီဒီများကို ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင် စတင်ရောင်းချ နေကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ခံများက ပြောသည်။
နအဖစစ်အစိုးရက ၎င်းတို့ပိုင် ရုပ်မြင်သံကြားများတွင် ဒေသတွင်းမှ တကယ့်အဖြစ်အပျက်များကို ပြသခြင်း မပြုဘဲ စစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်များက လေဘေး ဒုက္ခသည်များအား မည်သို့ ကူညီနေသည် ဆို သည်များကိုသာ ပြသနေချိန်တွင် ယခုကဲ့သို့
တရားမ၀င် စီဒီများ ရောင်းချလာခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ စီဒီတချပ်ကို ကျပ် (၅၀၀) နှင့် ၀ယ်ယူခဲ့သူ ရန်ကုန်မြို့ခံတဦးက “လပွတ္တာဘက်က ပင်လယ်ကမ်းစပ်တလျှောက် လှေပေါ်က ရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုပြကွက်မှာ ကမ်းစပ်အပင်တွေကြား က ပုပ်ပွပြီး မျှောပါနေတဲ့ လူသေအလောင်းတွေ၊ တိရစ္ဆာန် ကျွဲနွားအသေကောင်တွေ အများကြီး တွေ့ရတယ်။ နောက် ပျက်စီးနေတဲ့ အိမ်ယာတွေ၊ တဲတွေ၊ အသက်မသေ ကျန်ရစ်သူတွေ ဒုက္ခရောက်နေကြပုံတွေကိုလည်း တွေ့ရတယ်။ ဒီ စီဒီခွေကို ကြည့်လိုက်ရင် ဧရာဝတီတိုင်းမှာ နာဂစ်မုန်တိုင်းကို ပြည်သူတွေ ဘယ်လောက်ခံလိုက်ရသလဲ ဆိုတာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း သိနိုင်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ရိုက်ကူးသူ အမည်မပါ၊ တည်းဖြတ်ထားခြင်း မရှိသည့် အဆိုပါ စီဒီခွေများကို မနေ့ကစပြီး ရန်ကုန်မြို့လယ်၊ မြေနီကုန်း၊ လှည်းတန်း၊ မရမ်းကုန်းမီးပွိုင့်နှင့် ဆင်ခြေဖုံးဈေးများတွင် ရောင်း ချနေကြောင်း သိရသည်။
နအဖ စစ်အစိုးရကမူ ဧရာဝတီတိုင်းတွင် ပြည်သူများ အမှန်တကယ် ခံစားနေရမှုများကို ဖုံးကွယ် ထားလိုပြီး မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား ညပိုင်းအစီအစဉ်များတွင် ပုံမှန်အချိန်များနှင့်မတူ (၁၅) မိနစ် တခါ Breaking News ဆိုပြီး စစ်အစိုးရအာဏာပိုင်များက ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ ပေးနေ ပုံကို ထုတ်လွှင့်ပြသနေသည်။
ယမန်နေ့ကလည်း ပြည်တွင်းထုတ် သတင်းဂျာနယ် ထုတ်ဝေသူများကို စာပေစိစစ်ရေးက ဖိတ် ခေါ်ပြီး လေဘေးကြောင့် ပြည်သူများ ဒုက္ခရောက်နေသည်ကို ဦးစားပေး မဖော်ပြဘဲ စစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်များက ပြည်သူများအား ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ ပေးအပ်ပုံကိုသာ အသားပေး ဖော်ပြရန် ဖိအားပေးခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။
ဒီ့မတိုင်ခင်ကမူ Weekly Eleven, Flower News, The Voice,7Days News၊ မော်ဒန် စသည့် ပြည်တွင်းဂျာနယ်များက လေဘေးသင့်ပြည်သူများ အတိဒုက္ခရောက်နေပုံများကို ကွက်ကွက်
ကွင်းကွင်း ရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြပြီး ပြည်သူများကလည်း အားပေးဖတ်ရှုကြကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေး မြေရှင်ပဒေသရာဇ်စနစ်ခေတ်လို အကြင်နာမဲ့နေ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရေးကြီးသည့် ကိစ္စရပ်တိုင်းကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးတို့ (၂) ဦးကသာ အဆုံးအဖြတ် ပေးနေသကဲ့သို့ စစ်တိုင်းမှူး (၁၃) ဦးကလည်း လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကို စနစ်တကျ ကျူးလွန်နေကြောင်း ကုလသမဂ္ဂအရာရှိတဦး၏ (၂၃) မျက်နှာ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ နှင်ထုတ်ခံရသည့် ကုလသမဂ္ဂ ထိပ်တန်းအရာရှိတဦးဖြစ်သည့် Charles Petrie က သူ့အစီရင်ခံစာတွင် ယခုကဲ့သို့ ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် လူထုဆက်ဆံရေးမှာလည်း အဆင့်တိုင်းတွင် မြေရှင်ပဒေသရာဇ်စနစ်ခေတ် ကဲ့သို့ အကြင်နာမဲ့လွန်းသည်ဟုလည်း Charles Petrie က ထောက်ပြသည်။ အကျိုးဆက်အဖြစ် ပြည်သူများ၏ဘ၀ကို စစ်အစိုးရဘက်က နားလည်စာနာမှု ခေါင်းပါးလာခြင်းဖြစ်သည်ဟုပါ အစီ ရင်ခံစာတွင် ဆက်လက်ဖော်ပြသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရ၀န်ကြီးဌာနပေါင်းစုံက စစ်အစိုးရ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များထံ တင်ပြသည့် ကိန်းဂဏန်းများ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များမှာလည်း အောက်ခြေတွင် အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက်နေသည့် အခြေအနေများနှင့် ဆန့်ကျင်နေသည်ဟု Mr Petrie က ထောက်ပြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုနှုန်းမှာလည်း ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတို့ထက် နိမ့်ကျနေသကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေးမှာ နာဂစ်မုန်တိုင်း မတိုင်မီ လပိုင်းအလိုကပင် ချွတ်ခြုံ ကျမည့် အနေအထားမှာရှိသည်ဟု အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြသည်။
နေပြည်တော်က ကြည့်မည်ဆိုလျှင် တိုင်းပြည်စီးပွားရေး (၁၃) ရာနှုန်း တက်နေပါသည်၊ စာတတ် မြောက်မှုနှုန်း တက်နေပါပြီ စသည့် အစိုးရ အစီရင်ခံစာများအရ တိုင်းပြည်ကြီး စည်ပင်နေသည်ဟု ထင်စရာရှိသည်။ သို့သော် လိမ်ထားသည့် ကိန်းဂဏန်းများက စစ်ခေါင်းဆောင်များ တိုင်းပြည် အခြေအနေမှန် ဘာကြောင့် မသိနိုင် ဖြစ်နေသလဲဆိုသည့် အခြေအနေကို ထင်ဟပ်နေသည်ဟု သုံးသပ်ထားသည်။
Charles Petrie သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကုလသမဂ္ဂ လူမှုရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေး တာဝန်ခံအရာရှိ အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခု လောင်စာဆီ ဈေးတက်သည့်ကိစ္စ ပြည်သူများ ဆန္ဒပြခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး စစ်အစိုးရအနေနှင့် ပြည်သူများအသံကို နားထောင်သင့်ကြောင်း၊ တိုင်းပြည်၌် လူမှုရေး အခြေအနေ ယိုယွင်းနေကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်အပြီးတွင် Charles Petrie ကို စစ်အစိုးရက တိုင်းပြည်မှ နှင်ထုတ်ခဲ့သည်။
US navy ship ready to help
The United States has said three navy ships including an aircraft carrier are positioned in international waters in the vicinity of Burma and stand ready to support humanitarian assistance relief efforts if they are given permission by the government of Burma. And also Indian military is going to send fifty military doctors to Burma to help people in medical need.
UN frustration at Burma cyclone response
Foreign diplomats in Burma say the military government has promised to take them to the disaster-hit areas of the Irrawaddy delta.
They said the trip would take place on Saturday, two weeks afteracyclone swept across the delta leaving more than seventy thousand people dead or missing.
Aid is said to have reached only pockets of need.
A United Nations spokeswoman Michelle Montas said the Secretary-General, Ban Ki-Moon, had been trying to speak to Burma's military rulers but although the phone was ringing but no one was picking it up.
The European Union's top aid official, Louis Michel, who's leaving Burma, said it wasn't clear if he'd made progress in persuading the generals to allow in more people and supplies.
Burma's government has said the first phase of emergency relief is over.
FAO: Burma could become importing rice
FAO estimates over 700,000 acres of farmland were destroyed and it will need $200 million to rebuild those area.
Rebuilding programmes are urgently needed and unless the farmers could resume their work before June, Burma could becomearice-importing country, said FAO.
The Red Cross is appealing for more than fifty million dollars in aid to help survivors of Burma's Cyclone Nargis. The Red Cross said Burma was facingahumanitarian catastrophe of staggering proportions. Launching the appeal, the charity again warned that any more delays in the aid operation would make an already dire situation still worse.
Please join in Global Day of Action on Burma in Ca...
လေဘေး ပြန်လည်ထူထောင်ရေး စစ်အစိုးရက စီးပွားရေးကုမ္ပဏ...
မုန်တိုင်းကြောင့် သေဆုံးသူ (၉၀) ရာနှုန်းကျော်တွင် က...
ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေး အကြီးအကဲမြန...
NEJ/ ၁၆ မေ ၂၀၀၈ နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ပြီး (၁၂) ...